Bazimisele ukukhuculula inhlokodolobha yaKwaZulu-Natal ibe sezingeni elikahle - Bayede News
Ngabe isiko noma umkhuba uma indoda isinqunu esibayeni?
Akusiyona imfihlo ukuthi idolobha uMgungundlovu alikho esimweni esigculisayo ikakhulukazi esigabeni elikuso sokuba inhlokodolobha yesifundazwe iKwaZulu-Natal yingakho uMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho, Ezokuvakasha Nezemvelo, uMasipala uMsunduzi kanye nePietermaritzburg Midlands Chamber of Business (PMCB) sebeqale uhlelo lokubuyisa isithunzi saleli dolobha.
ISikhulu Esiphezulu sePMCB uNkk uMelanie Vennes, sichaza ngalolu hlelo sithe: “Inhlokodolobha akumele ibukeke ngale ndlela eyiyo njengamanje, ifanelwe ingqalasizinda efanele isigaba idolobha elikusona. Kumele idolobha libe sesimweni sokukhulisa umndeni ngakho-ke kumele libuyiselwe kulobuya buhle elaliyikho.”
Uthe banquma bengosomabhizinisi ukuthi kumele izakhamuzi ziziqhenye ngedolobha lazo waveza ukuthi kumphula inhliziyo ukubona inkaba yedolobha ingekho esimweni ingakho wakhuluma neMeya kaMasipala uMsunduzi, uMzimkhulu Thebolla, ukuthi kukhona okumele kwenziwe. “UMasipala awunayo imali yokulungisa idolobha ngakho kudingeke ukuba siqhamuke nento eyehlukile nesikholwa ukuthi yinhle. Okumqoka ukuthi kuzobandakanya zonke izakhamuzi zaseMsunduzi okuwukuthi sonke uma sibamba iqhaza sizokwazi ukukuzuza,” usho kanje.
UNkk uVennes uthe bacele imali eyizi-R3 000 kuMnyango Wezokuthuthukiswa Komnotho ukuze bakhuculule idolobha njengokususa izinto ezingasasebenzi nezimpande zezihlahla ezinqunyiwe ezigcwele edolobheni.
Uveze ukuthi enye indlela abazoyisebenzisa ukuqhuba lo mkhankaso ukuthi umuntu athenge isiqephu esifakwa lapho kuhamba khona abantu ngezinyawo esijwayele ukwakhiwa ngokhonkolo kepha ezizobe zithengwa zakhiwe ngoplastiki namabhodlela agayiwe esikhundleni sesihlabathi uMngeni ukuze kungathikamezeki imvelo.
Isiqephu ngasinye sibiza ama-R200 kanti sizobhalwa igama, isibongo nosuku lokuzalwa komuntu osithengile. “Umuntu angakwazi ukuthi athengele ilungu lomndeni wakhe, uma esheshe wathenga igama lakhe lizoba sekuqaleni kepha ngeshwa ozoba owokuqala kulokhu iMeya ethembisile ukuthi yiyo ezoba eyokuqala ukuxhasa,” usho kanje.
UNkk uVennes uthe abantu bangabamba iqhaza ngezindlela ezahlukene okungadingi imali okungaba ukuqoqa amabhodlela bawase ezindaweni ezahlukene, amaplastiki ukugcina idolobha lihlanzekile.
“Lokhu kuzobuyisa ukuziqhenya kwezakhamuzi ngedolobha lazo. Abanye banganikela ngopende nemigqomo. Ezinyangeni ezizayo sizobe sicela usizo, uma zinombono ezifisa ukuwedlulisa sizowamukela,” kusho uNkk uVennes.
UBiden uthi umbango wezohwebo neChina usazoqhubeka
IMeya uThebolla ithe ngenkathi bethatha izintambo ngoNcwaba wezi-2019 uMasipala ungena ngaphansi kukamlawuli, izinto ezimqoka abazihlonza ukwenza ubudlelwano phakathi kwemboni ezimele noHulumeni.
“Sanxusa wonke umuntu waseMsunduzi ukuthi asondele khona sizoqinisekisa ukuthi sibuyisa isithunzi seCity of Choice (isiqubulo senhlokodolobha) abanye sebethi idolobha elingcolile. Uma imsebenzi enjengalena seyenzeka siyabona ukuthi lokhu esakunxusa sekuzokwenzeka. Ingakho uma iPMCB iza kuthina siyamukele ngoba lokhu into okwakumele engabe yenzeka kudala. Inhloso yethu ukuthi abantu bakuleli dolobha baziqhenye ngedolobha labo, ingakho isabelomali sethu sokuqala sabeka phambili ukulawulwa kwemfucuza, sasifuna ukuphendula kusikhalazo sokuthi idolobha lingcolile, asikwazi nokunxenxa abatshalizimali futhi lixosha labo abasedolobheni bagcine benza amabhizinisi abo kwezinye izindawo,” kusho uMeya.
Iqhube yathi bafuna idolobha wonke umuntu azoziqhenya ngokuthi usebenza kulona, wenza ibhizinisi kulo, uhlala kulo futhi ukhulisela kulo izingane. Uthe balamukele ngezandla ezimhlophe uxhaso loMnyango lokuqalwa kwalolu hlelo wathi futhi bayazi ukuthi badinga okungaphezu kwalokho.
“Esikunxusayo ukuthi wonke umuntu othanda idolobha lakhe asondele abambe iqhaza kulolu hlelo ngoba iyona ndlela esizobuyisa ngayo isithunzi sedolobha lethu. Nginxuse amakhansela ukuthi anikele, nami ngizosithenga esami isiqephu sokuqala hhayi ngoba ngiyiMeya kodwa ngoba ngiyalithanda idolobha lami, ngizobuza futhi ukuthi nginikele kangakanani emva kwalokho,” isho kanje.